‘ब्याजदर र अनलाइन कारोबार नै शेयर बजार बढ्नुको मुख्य कारण’–हरिसुदन दाहाल
नेपालको शेयर बजार अहिले बढ्दो क्रममा छ । बजारका लगानीकर्ताले यसपटक राम्रो आम्दानी गर्ने अवसर पनि पाएका छन् । बजार बढ्नुको मुख्य कारण ब्याजदर एकल विन्दुमा झर्नुलाई लिनुपर्ने कतिपय लगानीकर्ताको भनाई छ । यस्तै अनलाइनबाट कारोबार सम्भव भएकोले पनि कारोबार रकममा उच्च वृद्धि भएको शेयर अभियान्ताहरु बताउँछन । के बजार अझै बढ्ने सम्भावना छ ? यस्तो बेला कसरी लगानी गर्ने ? यिनै विषयमा केन्द्रीत रहेर शेयर अभियान्ता हरिसुदन दाहालसँग बैंकको खबरले कुराकानी गरेको छ ।
नेपालको शेयर बजार अहिले एकदम धेरै बढेको अवस्था छ । अहिलेको बजारको स्थितिलाई तपाईले कसरी हेर्नुभएको छ ?
नेपालको शेयर बजारले प्रत्येक चार देखि पाँच वर्षको साइकल बनाएको छ । त्यसै अनुसार लगातार ४ वर्ष सम्म बजार घटिरहयो । तर फेरी बजार बढ्न शुरु गरेको छ । यससँगै बजारलाई चारपाँच वटा फ्याक्टरले असर पारेको छ । पहिलो कुरा अनलाइन कार्यान्वयनमा आउनु हो । दोस्रो कुरा बैंकहरुको ब्याजदर एकल विन्दुमा झर्नु हो । तेस्रो नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेबीच देखिएका विवाद हटनु र चौथोमा स्थिर सरकार निर्माण हुनु पनि बजार बढ्नुको आधार हो ।
शेयर बजारमा भएका विभिन्न सुधारहरुले गर्दा नै अहिले बढ्दो अवस्था आएको हो भन्ने नै हो त ?
बजारमा सुधार पनि भयो र एउटा साइकल पनि पुरा गरेको छ । मुख्यतया बजारलाई ब्याजदरले नै निर्देशित गरेको हुन्छ । लगानीकर्तालाई जहिलेपनि ब्याजदरले प्रभावित पारेको हुन्छ । ब्याजदर माथि गयो भने बजारमा लगानी गर्ने वातावरण बन्दैन । अहिले ब्याजदर एकल विन्दुमा झरेको छ । त्यसैले एकै दिन ९ अर्ब बढी कारोबार भएको छ । कारोबार उच्च हुनु भनेको बजारमा धेरै भन्दा धेरै मानिसहरु लगानीका लागि आएका छन भन्ने पनि हो । त्यस्तै अनलाइनलाई गुणस्तरीय र विश्वसनिय बनाउनका लागि लगानीकर्ताले आन्दोलन नै गर्नुप¥यो । तर पछिल्लो समय अनलाइनबाट कारोबार गर्न मिल्ने भएपछि बजारले निकै ठूलो फडको मारेको निश्चित हो ।
अहिले बजारमा निकै धेरै वृद्धि भइसकेको छ । विगतमा पनि नेप्से उच्च विन्दुमा पुगेका बेला खरिद गर्ने लगानीकर्ताहरु निकै समस्यामा परेका थिए । अहिले पनि त्यही अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । यस्तो बेलामा कसरी लगानी गर्ने ?
अहिले बजारमा दिन प्रतिदिन नयाँ लगानीकर्ताको प्रवेश भएको देखिन्छ । कुनैपनि कम्पनीको वासलात कस्तो छ, मूल्य आम्दानी अनुपात कस्तो छ, उसको क्षमता कस्तो छ, रिजर्भ कस्तो छ, सञ्चालकहरु कस्ता छन भन्ने कुरा नबुझिकन नयाँ लगानीकर्ताले लगानी गर्नुहुन्छ । त्यसैले पुराना र बजारका ठूला खेलाडिहरुले विक्री गर्ने र नयाँ लगानी कर्ताले किन्ने समय एउटै हुन्छ । कतिपय अवस्थामा नयाँ लगानीकर्तालाई शेयर भिडाउने काम पनि हुन सक्छ । त्यसैले मैले के भन्छु भने बजार बढेको छ भनेपछि हिजोको अवस्था के छ ? कम्पनीको वित्तीय अवस्था, रिजर्भ र सञ्चालकहरु को हुन भन्ने थाहा पाउनै पर्ने हुन्छ । तर लगानीकर्ताले विपरित काम गर्ने गर्नुहुन्छ । मलाई के लाग्छ भने बजार १० प्रतिशत बढ्यो भने किन्नुहुन्छ र १० प्रतिशत घट्यो भने बेच्नुहुन्छ । यो प्रवृति नयाँ लगानीकर्तामा देखिन्छ । यस्तो प्रवृतिलाई सुधार गर्नैपर्छ यदि शेयर लागनी गर्ने हो भने । कारोबार गर्दा निकै अनुशासनमा बस्न सक्नुपर्छ ।
आधारभुत र प्राविधिक विश्लेषण गरेर लगानी गर्नुपर्छ भनिन्छ । यस्ता कुराहरु कसरी थाहा पाउने ?
मुख्य कुरा प्राविधिक विश्लेषणले पनि मार्गनिर्देश गर्छ । त्यस्तै आधारभुत कुराहरु पनि थाहा पाउनुपर्छ । कुनैपनि कम्पनीको मूल्य यहाँ पुग्यो भनेपछि त्यसबाट के फाइदा हुन्छ भन्ने थाहा पाउनुपर्छ । यदी कुनै कम्पनीले १० प्रतिशत बोनस दिदैछ भने आफूले किन्न लागेको मूल्यमा शेयर किन्दा फाइदा हुन्छ की हुँदैन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । बोनस दिने घोषणा गरिसकेपछि ५० प्रतिशत बजार मूल्य बढिसक्यो भने त्यसबाट कुनै फाइदा हुँदैन । यस्तो विषयमा निकै ध्यान दिनुपर्छ ।
शेयर बजारलाई सरकारसँग पनि जोडिन्छ । सरकारका नीतिहरुबाट पक्कैपनि शेयर बजार प्रभावित हुन्छ । तर अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमले शेयर बजारलाई खासै असर पारेको देखिएन । यसको असर भविश्यमा देखिन्छ की ?
हामीले दशकौंदेखि भन्दै आएका छौं की बजारको सुधारका लागि प्रणाली बलियो बनाउनु पर्छ । प्रणाली बलियो भयो भने विश्वको कुनै पनि बजारमा अन्य कुराहरुको खासै असर पर्दैन । कारोबार प्रणाली र ब्याजदर र लगानीकर्ताको मनोविज्ञान नै मूख्य कुरा हो । राजनीति भनेको गौण कुरा हो । अहिले नेपालमा प्रणाली बलियो छ । अहिले नेपालमा ८५ प्रतिशत मान्छेहरुले अनलाइनबाट खरिद विक्री गर्छन । पैसा लिन र दिन पनि कुनै समस्या छैन । त्यसैले राजनीतिक घटनाक्रम निरन्तर परिवर्तन भइराख्ने कुरा हो । यसबाट बजारलाई कुनै असर पर्ने देखिदैन ।
नेप्से सूचक निकै बढ्छ भन्ने हल्ला पनि बजारमा छ । तपाई जिम्मेवार लगानीकर्ता भएको हिसाबले पनि बजारको अनुमान के गर्नुहुन्छ ?
नेप्से यसअघि १८८१ पुग्दा खेरी दैनिक कारोबार निकै कम थियो । बढीमा २ देखि ३ अर्ब पुगेको थियो । त्यतिबेला त्यो धेरै नै थियो । तर अहिलेको कारोबार पहिलाको भन्दा ३ गुणा बढी छ । त्यसैले मेरो विचारमा ३ हजार देखि ३५ सयको बीचमा नेप्से पुग्छ जस्तो लाग्छ । यसको बलियो आधार भनेको ब्याजदर नै हो । अहिले पनि राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अधिक भएर विभिन्न उपकरण मार्फत तरलता व्यवस्थापन गर्न लागिरहेको छ । यस्तै विभिन्न क्षेत्रका उद्योग व्यवसायीहरु शेयर बजारमा लगानीका लागि आउनुभएको छ । अन्य क्षेत्रमा कोभिडको असर परेका कारण बजारमा लगानी बढीरहेको देखिन्छ । यो अवस्था निकै लामो समय सम्म रहने देखिन्छ । त्यसैले नेप्से परिसूचक बढ्ने निश्चित जस्तै छ । तर यसो भन्दैमा अनुशासन भन्दा बाहिर गएर लगानी गर्न भने हुँदैन ।
अन्त्यमा केही भन्नुहुन्छ ?
सम्पूर्ण शेयर लगानीकर्ताहरुलाई के भन्नु चाहन्छु भने हल्लाको पछाडि लागेर शेयरमा लगानी गर्नु हुँदैन । कम्पनीका सूचकहरु हेर्नैपर्ने हुन्छ । लहडमा लागेर बजारमा लगानी गर्दा दुर्घटना हुनसक्छ । सबै कुराहरु मोबाइलबाटै हेर्न सकिन्छ । अनलाइनबाटै खरिद विक्री गर्न सक्ने अवस्था छ । अरुले धेरै पैसा कमाएको देखेर लगानी गर्ने भन्दापनि आफ्नो बचतलाई शेयर बजारमा व्यवस्थापन गर्न सक्दा दिर्घकालिन फाइदा लिन सकिन्छ ।